I-Raysonon Nonwoven Fabric Makhiqizi nomhlinzeki
IRaysonon yenze i-PP Spunbond Indwangu elukiwe yendwangu, ye-SS yendwangu elukiwe, indwangu enolukiwe yezokwelapha, indwangu e-tabrecloth elukiwe nendwangu yezolimo elukiwe.
Raysonon izindwangu ezilukiwe
IRaysonon izibophezele ekucwaningeni okungukulwa, ukuthuthukiswa kanye nokukhiqizwa. Imikhiqizo yayo eyinhloko i-PP ayilukiwe yendwangu yendwangu, i-SS neva yendwangu elukiwe, i-SMS nonloved yendwangu elukiwe, indwangu enolukiwe, inaliti puch non woves nendwangu elukiwe.
Indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka ye-SS
LeliIndwangu eluhlaza okwesibhakabhaka ye-SS isetshenziselwa ungqimba wokuqala wemaski. Imvamisa kungu-25gr ububanzi ububanzi obungu-175mm. Indwangu ye-SS engelona iqiniso ithambile, idlangile futhi iyaphindisela kwamanzi. Futhi le ndwangu eluhlaza okwesibhakabhaka engalukiwe ekhiqizwa yiRayson ingaqinisekisa ikhwalithi.
Umenzi ochwepheshe weTabrecloth enobuhle (Roll) eChina
I-tablecloth elukiwe, eyaziwa nangokuthi indwangu yetafula le-TNT, iyisitabane esenziwe nge-polypropylene ebonakalayo. Ngezinzuzo ze-eco-friendly, okusebenziseka kalula, futhi eziphindaphindeke, ezingezona zisetshenziswa ama-polypropylenetable asetshenziswa kabanzi ezindaweni zokudlela, amahhotela, kanye nemicimbi ekhethekile efana namaqembu, imishado njll. Imikhiqizo yethu eyinhloko ayilona elenziwe ngendwangu, Roll, TntT Table Runner, i-pre-cut tabrecloth roll ne-placemat elukiwe.
Indwangu ethambile / ye-hydrophilic nonlove
Indwangu engenaluliwe ye-SS yenziwe ubuchwepheshe beBeam ephindwe kabili. Ngabe u-lnow indwangu yendwangu ye-hydrophilic? Ezinye zezici ezithandekayo zalesi simbozo esingelulukiwe esiphefumulelwe, sithambile, i-hydrophilic futhi singenangozi. Lezi zinhlobo zendwangu ye-hydrophilic zisetshenziswa njengento engaphakathi yesendlalelo semaski. IRaysonon iyinhlangano yabakhiqizi bendwangu enobuchwepheshe be-hydrophilic, eneminyaka eminingi yesipiliyoni esicebile.
Ishidi lokulala elilahlekile le-SS
Indwangu engabonisiwe ye-SS iyinto enhle yokwenza ukukhiqizwa kwamasheya we-Hospital Special sheet, yenzelwe ukusetshenziswa ngemibhede yabahlengikazi, imibhede yesibhedlela kanye nemibhede ye-spa. Lawa amashidi asetshenziswayo, akhiqizwa ngokudonswa kwemibhede elahlekile
I-Raysonn Noven Company iyinkampani eholayo eholayo yomenzi wendwangu kanye nomhlinzeki eChina onayo iminyaka engu-15 yolwazi ekukhiqizweni okungalukiwe no-r&D. Uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi oluphelele kanye nesipiliyoni sokukhiqiza esicebile kungaqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo ozinzile futhi omuhle
Iqembu lokuthengisa elineminyaka engu-15 lokuhlangenwe nakho kwezohwebo lwakwamanye amazwe lunganikeza ngezinsizakalo zobungcweti ngesiNgisi, iSpanishi, isiNtaliyane, nesi-Arabhu. Imikhiqizo yethu ithengiselwa amazwe angaphezu kwangama-40 emhlabeni jikelele.
IRaysonON inezintambo eziyi-10 ezithuthukile zokukhiqiza zendwangu, ezingakhiqiza amathani angama-3,000 ezindwangu ezingezona izindwangu ngemibala ehlukahlukene ngenyanga, enobubanzi obukhulu be-4.2m. Izinhlobo zomkhiqizo ziyizindwangu ezingezona ezilukiwe, i-SMS, izindwangu ezishunqisayo, kanye nenaliti kugwazwe izindwangu ezingalukiwe, futhi zifaka indwangu engalukiwe.
I-Interiry enokwanele eyanele eyanele ekwanele eWarehouse iqinisekisa ukuqina kwamanani entengo yomkhiqizo.
I-FOSHAN Rayson Non Woven Co, Ltd. Yinhlangano ehlanganayo ye-sino, esungulwe ngo-2007, etholakala edolobheni laseFoshan Shishan High Zone zone, ngaphansi kwemizuzu engama-30 ukusuka eGuangzhou Bayun International Airport, eVolkswagen, Honda, CMO namanye amabhizinisi, enesimbozo esiyinkimbinkimbi indawo enamamitha-skwele angama-80,000 futhi uqasha abantu abangaphezu kwama-400. Le nkampani isebenza ngokukhiqiza izindwangu ze-Spunbond ezingezona izindwangu nemikhiqizo yendwangu engalukiwe, enamaphesenti angaphezu kwangama-90 emikhiqizo yawo ethengiswa emazweni angaphezu kwama-30.
I-FOSHAN Rayson Non Woven Co, Ltd. Ungumkhiqizi onamava embonini yendwangu engalukiwe eneminyaka yobudala. Izibophezele ekucwaningeni kwendwangu, ukuthuthukiswa, kanye nokukhiqizwa futhi inezintambo eziyishumi ezithuthukile zokukhiqiza zendwangu, ezikwazi ukukhiqiza indwangu ye-PP engelona iqiniso, i-SS, iMeltbleble, inaliti Puch ne-Spunle. Ukukhiqiza uhla lwesisindo kusuka ku-10gsm kuya ku-150gsm ngaphakathi kobubanzi be-4.2m, ngenani lokukhiqiza lonyaka elinesisindo esingaphezu kwamathani angama-36,000. Le nkampani iyakwazi ukukhiqiza izindwangu ezingeyona eyenziwe ngemibala eminingi ehlukene nosayizi, ezifanele ukusetshenziswa okuningi okuhlukile.